थालेमिसिया राेगले थलिएकाे एक बालककाे कथा | ईमाउण्टेन समाचार
थालेमिसिया राेगले थलिएकाे एक बालककाे कथा
मंसिर २४, २०७८ पढ्न ८ मिनेट
प्रतीक पाैडेल भैरहवा । नाबालक छोरा आशिक अलि ३ बर्ष पुग्दा नपुग्दै विरामीले थलिए । उनी थलिएपछि उनको आमा सफिकुन निशा र बुबा सैयद चिन्तीत हुदैं गए । नहोऊ्न पनि किन र ? आशिक जस्तै थलिदैं यस अघि निशा र सैयदले दुई सन्तान गुमाईसकेका थिए ।
दुई सन्तानलाई गुमाएको वियोगको घाउ सन्चो हुन नपाउदैं अर्को छोरोलाई पनि उस्तै रोगले च्यापेपछि उनीहरु रुने र चिन्तीत हुने बाहेक अन्य उपाय रहेन । किनकी उनीहरुसँग राम्रो अस्पतालमा उपचार गराउन पनि सक्ने आर्थिक सामथ्र्य थिएन । तथापी ज्याला मजदुरी गरेर आर्जन गरेको कमाईले भारत र नेपालका विभिन्न अस्पतालमा उपचारकोलागि दौंडिएं । रोग दूईको एक हुन सकेन ।
रोग नै पत्तो लागेन । नाबालक छोरो दिनानुदिन थलिदैं गए , जत्ति दौडिए पनि जति अस्पतालमा पुगेपनि रोग पत्तो नै नलागेपछि उनीहरु झनै निराश हुदैं गए । यस्तैमा एकजना साथिको सल्लाहमा भैरहवाकै डा. राजु काफ्लेलाई चेक गराउन पुगें । नजिकको तीर्थ हेला भने झै टाढा टाढा उपचार गराउन दौंड धुप गरेका उनीहरु डा. काफ्लेको सम्पर्कमा आएपछि आशिकले नयाँ जीवन पाएका छन् ।
उनले मृत्युलाई जीत्ने आशा पलाएको छ । यतिबेला आशिषलाई लागेको रोग पत्ता लागेको पनि छ तर उक्त रोगको उपचारमा धेरै रकम लाग्ने हुदा परिवार कसरी उपचार गर्ने भन्ने तनाब बढेकोछ । बालरोग विशषज्ञ डा. काफ्लेका अनुसार आशिकलाई थालेमेसिया रोग लागेको छ । यो रोग अपुष्ट रक्तकोषका कारण शरीरमा राम्रोसित रक्तकोषको विकास हुन नसक्दा लाग्ने एक प्रकारको रोग हो ।
जसमा हेमोग्लोविन उत्पादनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । यो रोग रगत सम्बन्धी देखा पर्ने रोगहरुमध्य निकै अप्ठेरो रोग हो । यो रोग लागेका विरामीलाई रगतको कमी हुने भएकाले ३/४ हप्ताको फरकमा नियमित रगत दिनु पर्दछ । साथै समयमै रोग पत्ता लागेमा बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टमार्फत पनि यो रोग निको पार्न सकिन्छ । डा काफ्ले आशिकको स्थायी उपचार गर्न चाहान्छन् । काफ्लेका अनुसार आशिकको स्थायी उपचारको लागी १५ लाख खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
आशिकको उपचार नेपालको केही अस्पतालमा मात्र संभव छ । तर उपचार खर्च महंगो रहेको छ । तर भारतमा भने केही कममा हुने देखिएको छ । अन्सारी दम्पत्ती आशिकको उपचार गर्न त चाहान्छ तर आर्थीक अवस्थाले थलिएको यो परिवार संग उपचार गर्न रकमनै रहेको छैन । मासिक १५ हजार मुस्किलले कमाउने यो श्रमिक परिवार १५ लाख जस्तो ठुलो रकम कसरी जुटाउन सकोस् ।
आशिकका बुवा सैयद अली अन्सारी र आमा सफिकुनले दुई सन्तान गुमाउदा सम्म पनि कहिले थाहा पाएनन् के कारणले उनका सन्तानले जिवन गुमाउनु परेको छ । तेस्रो सन्तानको रुपमा जन्मिएका आशिक जन्मदेखिनै असवस्थ हुदै गएपछि उनिहरु फेरी पनि सन्तान गुमाउने भयले अस्पताल भौतारिदै जादा डा. काफ्लेको सम्पर्क पछि बल्ल आफ्ना दुई सन्तानको मृत्युको कारण र अहिले आशिषलाई लागेको रोगको बारेमा थाहा पाए ।
सैयद अली र सफिकुनले पहिलो सन्तान २०६८ सालमा जन्माए पनि उक्त सन्तान १० महिनामै मृत्यु भयो । त्यसपछि २०७१ सालमा जन्मिएको दोस्रो सन्तान १७ महिनामा मृत्यु भयो र आशिक २०७४ सालमा जन्मिएका हुन् । अन्सारी दम्पत्ती पेशाले श्रमिक हुन् । घर निर्माणको कार्यमा मजदुरको रुपमा काम गर्दै आएका अन्सारी दम्पत्तीले महिनामा १० देखि १५ हजार मुश्किलले आम्दानी गर्छन् ।
बिगत १ बर्ष देखि अन्सारी दम्पत्तीले आशिकको उपचारको लागी मासिक ६ देखि ७ हजार रुपैया उपचारको लागी मात्र खर्च गर्दै आएका छन् । ४ बर्षिय बालक आशिकले संसार बुझ्ने अवशर पनि नपाउदै दुर्लभ रोग थालेमेसियाका कारण जिवन मृत्यु संग लडिरहेको छ । आशिक हाम्रो समाजको भविष्य हो । आशिषलाई बचाउनकोलागि यहाँहरुले सक्दो सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ । सहयाेग गर्नकाे लागि ९८०४४५०२७१ मा सम्पर्क गर्नुहाेला ।
औलो निवारणमा चुनौती, कञ्चनपुरमा चार महिनामा भेटिए १७ जना बिरामी
जसपाले नेपालगन्ज पनि खाेजेपछि बल्झियाे विवाद, गठबन्धनको बैठक बस्दै
रसुवामा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा दुई जना घाइते
नेपाल–बंगलादेशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्यो